Sei ndichifanira kutsigira webhusaiti yangu yekutsvaga optimization ne SEO video marketing?
Kakawanda zvinotora nguva yakawanda uye kushanda kuti uone kunyange zviratidzo zvekutanga zve SEO zvichitanga zvitsva. Nzira yekusika sei kukura kwakasimba? Iwe unofanirwa kuisa yako yakamira yekutsvaga kugadzirisa hurongwa nemamwe zvirongwa zvekuita kukwidza vose vateereri chaivo nevanotsvaga tsvakurudzo. Saka sei usina kuedza zvimwe zvirongwa zve SEO video marketing? Zvinoratidzika semusanganiswa akakwana kutarisa kune vamwe vangave vatengi kana vachichengetedza nekukudziridza vateveri vako kana vadzidzisi vako, handizvo here? Chero zvakadaro, ndinotenda mazwi anotevera pamusoro pekushandisa SEO uye kubudiswa kwemavhidhiyo kuchave kwakakosha nokuda kwekufungisisa.
Kuwana hurukuro yakawanda
Zvinotoshamisa, asi zvino iweTUbe wakava injini inotsvakurudza kupfuura yeGoogle, uye naizvozvo ichibva kure kumashure kwemaoko akabatanidzwa eBing ne Yahoo. Zvinorevei? Hapana zvachose, kunze kwekuti vanhu vanongoda kutarisa mavhidhiyo. Saka, sei zvingafanirwa kunge iri pfungwa yakanakisisa yekuvhara mapeji ako nehupenyu hunobatsira kana hunofadza? Kwete kungova nemuviri wehutano hwakanaka, asi nokuda kwekutendeuka kukuru. Maererano nehuwandu hwekutsvaga kwekutsvakurudza, kutarisa yakakodzera mishandirapamwe yemamisheni, yakatsigirwa ne SEO video marketing inogona kukura vangave vateereri vanouya kuburikidza nekunyora maimeri ne 51%. Vanhu vanoti kuvhara peji yako yekutsiva nevhidhiyo yepamusoro inoita kunge ichiwedzera kuvimbisa, ine nguva inenge inenge inowedzera mukushandurwa. Sezvatotaurwa, chinangwa chekutsvaga Engine Engine Optimization pachako ndechekuchengetedza kuwedzera kutendeuka, asi uchigamuchira hutungamiri hwehutano. Ndokusaka ndichinzwa kusununguka kushanda, kunyanya nzira dzeSeO video yekudhinda kwemakore maviri ikozvino, uye zvechokwadi hazvizvidembi wamboita.
Ita kuti pave nehutano hwakasimba
Pakati pezvinangwa zvinotarisirwa kwenguva refu zve SEO kuri kuchengetedza uye kusimbisa simba rako rezita rekutsvaga, uye kuziva kwebhizimisi rebhizimisi rako pane Internet. Nenzira iyo, kubata ne SEO video marketing kunogona kubatsira kusimbisa nzvimbo dzako dzezvino kune zvimwe. Kuva nehuwandu hwehutano hwehutano hunokwezva kune vavanoteverwa zvinoreva kuti webhusaiti yako inova mutungamiri mukati memisika yako yemusika, kupa humwe hunobatsira uye hunogara hune ruzivo rwakakodzera, pamwe nekupindura mibvunzo inowanzoitika yevashandi. Zvose izvo zvichaita kuti vashanyi vako vese vazoenda kune imwe nguva muvateveri vakazvipira, kwete kuti vatenzi vechokwadi.
Siya vateveri vako shure, fambisa webhusaiti yako ne SEO video marketing
Mukurwisana kwemazuva ano inowanzoomeswa, vatengesi vemabhizimisi vari kurwisana niches imwechete kana vavanotungamira vavariro, saka kubheta zvakanyanya zvakafanana, kwete kutaura zvakafanana mazwi uye mazwi mashoma. Asi ikozvino kuwedzerwa kwehuwandu hwehupenyu hwehutano hunoita kuti huratidzwe pamusoro peSERPs, ruoko-mu-ruoko nemashoko ekutanga emagwaro. Ndosaka musingafi mukana uyu wakanaka kwazvo wokurova pakarepo vadzivisi venyu, kunyangwe avo vachiri kuwana pasina SEO video marketing. Ingobhadhara nguva pamwe nekuedza kwevhidhiyo inofadza uye inokosha, kwete yeblog post kana infographic iwe waizoenda kusvitsa vhiki ino, somuenzaniso Source .